စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး - onepay
Onepay Business ကို
Sign Up လုပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
Onepay business ကို ဖန်တီးရာတွင် သင့်အတွက် မှတ်ယူဖန်တီးခဲ့ပါသည်။
သင်လိုအပ်သမျှကို တစ်နေရာတည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူကာ ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
အချိန် နှင့် ငွေကုန် သက်သာစေပြီး ပိုမိုထိရောက်သည်။
သင်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အချိန်နှင့်အမျှ notification များ နှင့် order history များမှတဆင့် လိုက်လံစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Onepay business ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုများကို ဆောလျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သကဲ့သို့ ငွေလက်ခံမှုကိုလည်း ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ငွေသားကိုင်ဆောင်ရန်မလိုသည့် ပေးချေမှုများအဖြစ် ပြောင်းနေသည့်အလျောက် ပြိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရှေ့ကရောက်နေရန်လည်း လိုအပ်သည်။
Onepay က ထိုသို့ရောက်နိုင်ရန် လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် အဆင့်များနှင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။
App တစ်ခုသာ လိုသည်။
Onepay ကုန်သည်များ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရေး အားပေးမှု
Onepay platform များပေါ်မှ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရေး အားပေးမှုများ
အတူလက်တွဲဆာင်ရွက်သည့် ကမ်ပိန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆိုင်များ၊ ကုန်သည်များ၏ မြင်သာမှုတိုးမြင့်စေခြင်း။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရာတွင် အကောင်းမွန်ဆုံးအကြံဉာဏ်များ ပေးခြင်း။
Customer များထံ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ အံဝင်ခွင်ဖြစ်တဲ့ ကြော်ငြာစာများကို Viber မှတဆင့် ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Customer ရရှိရန် အချိန်ကောင်းမှာ အကောင်ဆုံး ကြော်ငြာစာများပေးပို့နိုင်ပါပြီ။
Onepay Merchant များအားလုံးအတွက် customer များပိုမိုရရှိစေရန် ကောင်းမွန်သော ထောက်ပံ့မှုများ အပြည့်အဝ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
App အတွင်း banner ကြော်ငြာ နှင့် notification များ
Merchant များအတွက် Onepay အက်ပ်မှ တဆင့်လည်းကြော်ငြာစာတိုများ ပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး promotion အသစ်များအကြောင်းလည်း customer များထံ ပေးပို့သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အက်ပ်ထဲတွင်လည်း promotion ကြော်ငြာစာတန်းများ ပြုလုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများ မှတဆင့်လည်း Merchant များကို Customer များရှေ့အရောက်ပို့ပေးပြီး လူပိုသိ အောင်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Onepay business ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
Onepay နှင့်ဆိုလျှင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤ Onepay business ကို သင့်အတွက် မှတ်ယူကာ ဖန်တီးခဲ့ရာတွင် သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုဆန္ဒရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းတွင် အလားအလာကောင်းမွန်ပြီး တိုးတက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိအတွက် သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုသဖွယ် ခံစားရရှိနိုင်စေရန် ၂၄နာရီပတ်လုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် hotline လည်း ထားရှိထားသည်။
Onepay business ၏ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများတွင် ဤအရာများပါဝင်သည်။
အပြိုင်အဆိုင်များသော MDR rate များအပေါ်မှ အကျိုးရယူနိုင်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့တွင် online merchant ၄၀၀ ကျော်နှင့် Offline merchant ၄၀၀၀ ကျော် ရှိသည့်အတွက် app တစ်ခုတည်းဖြင့် အေးဂျင့်၊ ဈေးရောင်းချသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လုံခြုံစိတ်ချရသည့် T+1 ငွေပေးချေမှု ပြီးမြောက်ခြင်းစနစ်
POS များအစား “Scan & Pay QR’ system ကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ငွေသွင်း/ထုတ် အေးဂျင့်အဖြစ်ဖြင့် ကော်မရှင်များ ခံစားနိုင်သည်။
App မှ တဆင့် စားသုံးသူများကို ဒစ်စကောင့်များ ပေးနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ notification များရရှိပြီး history စစ်ဆေးနိုင်သည်။
Business ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့/မှ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
တစ်ခါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၅၀ အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
Wallet ထဲတွင် အများဆုံး မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၃၀၀ အထိ သိမ်းနိုင်သည်။
Business အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို အလွယ်တကူ ထည့်နိုင်၊ ထုတ်နိုင်သည်။
API integration, technology အတွက် နည်းပညာထောက်ပံ့မှု ရှိသည်။
*offline merchant များအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။
အသုံးပြုရန် အလွန်လွယ်ကူသည့်အပြင် တောင်းဆိုချက်ပေါ်မူတည်၍ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် report များ ရယူနိုင်သည်။
Onepay Business နှင့် ပတ်သက်၍ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
QR Code ကို Scan ဖတ်ပြီး Onepay business ကို အခမဲ့ရယူနိုင်သလို၊ website ကနေလည်း business form ကိုဖြည့်ကာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
‘BeaPartner’ ကိုနှိပ်ကာ အကောင့်ဖွင့်ပါ။
Business registration form မှာ အသေးစိတ်အချက်လက်များဖြည့်ပါ။
ဖြည့်စွက်ခြင်းအောင်မြင်ပါပြီ။ အလုပ်ဖွင့်ရက် ၃ရက်အတွင်း Onepay agent မှသင့်ကို ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
Business app သို့ Log in ဝင်ရန် သင့်ဖုန်းထဲသို့OTP ကို notification ရရှိပါလိမ့်မယ်။
Account ဖွင့်ခြင်းအောင်မြင်ပါပြီ။ သင့် customer များထံ QR Code ကို share ပြီး အလွယ်တကူ ငွေလက်ခံနိုင်ပါပြီ။
Onepay business account သို့ ငွေဖြည့်ရန် ‘Add Funds’ ကို ထိပါ။
AGD Bank corporate account နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ‘add bank account’ ကိုရွေးပါ။
အသေးစိတ်ဖြည့်စွက်ပြီး ‘Next’ ကိုထိပါ။
Phone number verification ပြုလုပ်ပါ။
အသစ်ချိတ်ထားသော Bank account ကိုရွေးပါ။
Onepay business account ထဲသို့ထည့်သွင်းလိုသော ငွေပမာဏကိုရွေးပါ။
ငွေဖြည့်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်ပါပြီ။
‘Cash In’ feature ကိုအသုံးပြုရန်၊ Cash in agent အဖြစ် register ပြုလုပ်ပြီး ကော်မရှင်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Customer ရဲ့ Onepay phone number (သို့) QR ကို scan ဖတ်ပါ။ customer ပေးသော cash in amount ကို ဖြည့်သွင်းပြီး ‘proceed’ ကိုထိကာ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ပါ။
Customer ရဲ့ Onepay account ထဲကို အောင်မြင်စွာနဲ့ငွေဖြည့်သွင်းပြီးပါပြီ။
Top up လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ငွေပမာဏကို သင့်ရဲ့ Onepay business account ကနေ နှုတ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
‘Cash Out’ feature ကိုအသုံးပြုရန်၊ Cash out agent အဖြစ် register ပြုလုပ်ပြီး ကော်မရှင်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Customer ရဲ့ Onepay phone number (သို့) QR ကို scan ဖတ်ပါ။ customer တောင်းဆိုသော cash out amount ကို ဖြည့်သွင်းပြီး ‘proceed’ ကိုထိကာ customer ထံသို့ OTP ပို့ပါ။
Customer မှပေးသော OTP ကိုထည့်သွင်းကာ ‘Confirm’ ထိပါ။
သင့် customer အတွက် အောင်မြင်စွာနဲ့ငွေထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Customer ရဲ့ ထုတ်ငွေပမာဏကို သင့် Onepay business account အတွင်းသို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Onepay Business အကောင့် ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ?
Onepay Business app ကို App Store/ Google Play Store မှ အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ။ ထို့နောက် မိမိကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ပြီး အွန်လိုင်းကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက Onepay Call Center – 09688 383838 ကို ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် နီးစပ်ရာ AGD ဘဏ်ခွဲများတွင် အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်။
Onepay ကုန်သည်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Onepay ကုန်သည်တစ်ယောက်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် 09-6883 83838 (သို့) contact@onepay.com.mm သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
Onepay Wallet က လုံခြုံစိတ်ချရလား?
လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ Onepay ကို ဖုန်းတစ်လုံးမှာပဲ login ဝင်ထားလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဝင်တဲ့အခါတိုင်း OTP code ပြန်ရိုက်ပေးရပါတယ်။ ထို့အပြင် app ကို အသုံးပြုပြီး ငွေချေခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်းများကို အတည်ပြုလုပ်ဆောင်ဖို့ မိမိကိုယ်ပိုင် passcode (သို့) လက်ဗွေ (သို့) Face ID လိုအပ်ပါတယ်။
Onepay ကို ဘယ်ဘာသာစကားတွေနဲ့ သုံးလို့ရပါသလဲ။
လက်ရှိအချိန်တွင် Onepay ကို English ဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာ (ဇော်ဂျီ) ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မကြာမီအချိန်တွင် ယူနီကုတ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
Onepay အကောင့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို မေ့သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
လျှို့ဝှက်နံပါတ် မေ့သွားရင် Forgot Password ကို နှိပ်ပြီး မိမိဖုန်းထံပေးပို့မယ့် တစ်ခါသုံးကုဒ်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုတစ်ခါသုံးကုဒ်ကို ဖြည့်စွက်ပြီး လျှို့ဝှက်နံပါတ်အသစ်ကို ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Onepay အကောင့်ရဲ့ Passcode ကို မေ့သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Passcode မေ့သွားရင် Forgot Passcode ကို နှိပ်ပြီး မိမိရဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြည့်ပြီး Passcode အသစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Onepay business app ကို AGD Bank account မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားဘဏ်အကောင့်နဲ့ ချိတ်လို့ရလား?
ပိုမိုအဆင်ပြေလုံခြုံစေရန်အတွက် Onepay business app ကို AGD Bank corporate account နဲ့သာ ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Onepay business app မှတစ်ဆင့် ဘဏ်အကောင့်ကို ငွေပြန်လွှဲရင် ချက်ချင်းရောက်လား?
Onepay business app ကနေ တစ်ခြားဘဏ်တွေကို ငွေပြန်လွှဲလို့ရလား?
လောလောဆယ်မှာ ယခု feature ကိုမရှိသေးသော်လည်း ၎င်းဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်ရန် ထပ်မံတိုးချဲ့သွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
MDR rate က merchant ဆီကပဲကောက်တာလား? User ဆီကရော ကောက်လို့ရလား?
MDR rate ကို ညှိနှိုင်းလို့ရလား?
Onepay ကို နယ်တွေမှာရော သုံးလို့ရနေပြီလား?
Error တစ်ခုဖြစ်လို့ ရှင်းပေးရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲ?
Error ပေါ်မူတည်ပြီး Onepay support team မှ ချက်ချင်း (သို့) အများဆုံး ၂ရက်အတွင်း ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။
Online merchant ဆိုတာဘာလဲ?
Customer များထံမှ ငွေပေးချေမှုများကို Onepay app ရှိ feature များမှတစ်ဆင့် (သို့) ကုန်သည်ဘက်မှ website မှတစ်ဆင့် online တွင် လက်ခံနိုင်သော merchant အမျိုးအစားပါ။
ကုန်သည်ဘက်က website မှာရော payment ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ?
Onepay Customer Service မှတစ်ဆင့် Online Merchant team နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။
Onepay Customer Service နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ 09-6883 83838 ကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် ကျသင့်ငွေပေးဆောင်ရပါမယ်။
Onepay မှာ user ဘယ်လောက်ရှိ နေပြီလဲ?
2020 နှစ်ကုန်ထိ အသုံးပြုသူပေါင်း 400,000 ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။
Onepay နဲ့ promotion တွေ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ?
Onepay နဲ့အတူ ရှက်တို/ရက်ရှည် promotion၊ ရာသီအလိုက် promotion၊ အထူး promotion စသည်ဖြင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Key Account Manager သို့ Onepay Customer Service မှတစ်ဆင့်09-6883 83838 ကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုဆက်သွယ်နိုင်သလို hello@onepay.com.mm သို့လည်း အီးမေးလ်ပေးပို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်ခွဲအားလုံးကို QR အတူတူ ထားလို့ရမလား?
မရပါ၊ မတူညီသော ဆိုင်ခွဲများအတွက် မတူညီသော QR Code များထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Onepay business app က နေ Scan & Pay မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြား ဘာဝန်ဆောင်မှုတွေ လုပ်လို့ရလဲ?
Customer များအတွက် Onepay အကောင့်ကို ငွေသွင်းခြင်းနဲ့ Onepay အကောင့်မှ ငွေထုတ်ခြင်းများကို လုပ်လို့ရပါတယ်။
Promotion တွေ Onepay ကနေတဆင့်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ?
Onepay အသုံးပြုသူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် လျော့ဈေးများ၊ အထူးအစီစဉ်များကို သင်တို့နဲ့အတူ လုပ်ဆောင်ပေးရန် Onepay မှအမြဲ ကြိုဆိုလျက်ပါ။ အသေးစိတ်ကို hello@onepay.com.mm ကိုလည်း အီးမေးလ်ပို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါ Onepay merchant team မှ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Onepay business အက်ပ်သို့ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ပြုလုပ်နည်း
သင့်လုပ်ငန်းပိုမို အဆင်ပြေစေဖို့ Onepay Business အက်ပ်ကို အသုံးပြုပြီး နေ့စဉ်ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ကိစ္စတွေလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
Register form တင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ Onepay agent မှ သင့်ကို အလုပ်ဖွင့်ရက် ၃ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ပါမည်။
ဆက်သွယ်နိုင်မည့် အမည်အပြည့်အစုံ *